B2B Marketing Survey: Uru 9 nke Social Media Marketing | Martech Zone
Ndị otu na Real Business Rescue nọ na-enye data a na Etu ndi oru ego B2B si akwado Social Media maka afọ ole na ole ugbu a ma melite ya maka 2015. Nnyocha ahụ na-enye ụfọdụ nchịkọta zuru oke nke nnabata mgbasa ozi mgbasa ozi B2B na-ezo aka na uru 9 nke ụlọ ọrụ B2B na-ahụ:
Asedbawanye okporo ụzọ
Zụlite ndị na-eguzosi ike n'ihe
Nye nghọta ahịa
Mee ka ọnọdụ ọchụchọ ka mma
Na-eto eto azụmahịa
Belata mmefu ahịa
Ọ na-adịghị ihe ọ bụla ghọtakwuo karịa na. Ekwenyere m na ụlọ ọrụ B2B na-elelị mmetụta dị ogologo oge nke mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta na-enwe n'ọtụtụ ebe. O juru m anya na nke ahụ ịkparịta ụka n'socialntanet abughi uru edere - mana ikekwe netwọkụ mmekọrịta gị na-ada n'okpuru ikpughe na mmekọrịta azụmahịa. Obi abụọ adịghị ya na ụlọ ọrụ ndị na-akpọtụrụ anyị na-ekpughere karịa ndị kpọtụrụ anyị ozugbo wee pụọ.
A na-ahapụkarị oge B2B na atụmanya ma ọ bụ onye ahịa, ọ bụghị oge ire ahịa ma ọ bụ oge mkpọsa ahịa nke ụlọ ọrụ. N'ihi ya, ọ chọrọ ka ụlọ ọrụ achụmnta ego na-eto nke ọma ma jigide ikike ha na mgbasa ozi mmekọrịta. Nọgide na-enye uru na ị ga-ewulite mmekọrịta bara uru.
Tags: ahịa b2bb2b uru ahiab2b uru ahia ahia
Feb 19, 2015 n’elekere 8:54 nke abali
Ezigbo infographic gbasara mgbasa ozi ọha.
N'oge dijitalụ, mgbasa ozi ọha na eze kwesịrị iji maka ịme azụmahịa ọ bụla gụnyere ma azụmahịa n'ịntanetị na azụmahịa na-anọghị n'ịntanetị. Ma nọgide na-enwe mmekọrịta dị mma na ndị ahịa.